We.com.mm - မြွေအကိုက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးက မသေဘဲ ကိုက်ခဲ့တဲ့မြွေက ဆီလီကွန်အဆိပ်ကြောင့် သေဆုံး
မြွေအကိုက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးက မသေဘဲ ကိုက်ခဲ့တဲ့မြွေက ဆီလီကွန်အဆိပ်ကြောင့် သေဆုံး
အစ္စရေးမော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Orit Fox ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရန် မြွေကြီးတစ်ကောင်နဲ့အတူ Sexy ကျကျဝတ်ဆင်ရင်း ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ အစပိုင်းတော့ မြွေကြီးဟာ လိုရာပုံသွင်းလို့ရပြီး အဆင်ပြေစွာ ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခြေအနေဟာ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားပြီး မြွေကြီးက Orit Fox ရဲ့ ဖောင်းကြွနေတဲ့ ရင်သားကို ကိုက်လိုက်ပါတယ်။
ရိုက်ကူးနေချိန်မှာ မော်ဒယ် Orit Fox ဟာ မြွေရဲ့ ဦးခေါင်းက သူမ ပါးစပ်အနားရောက်လာချိန်မှာ သူမက လျှာနဲ့ ယက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ မြွေက စိတ်တိုသွားလားတော့ မသိပါဘူး။ မြွေက ချက်ချင်းဘဲ Orit Fox ရဲ့ ရင်သားကို စတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။
ရိုက်ကူးရေးသမားတွေရော တာဝန်ရှိသူတွေပါ လန့်ဖြန့်ပြီး Orit Fox ရဲ့ ရင်သားကိုမြွေကိုက်ထားတဲ့ မြွေကို အတင်းပြန်လွှတ်အောင် လုပ်ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရင်သားကို ကိုက်လိုက်တဲ့ မြွေဟာ သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူကလည်း ကိုက်သေးတယ် ဘာလို့ သေရတာလဲဆိုတာ စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အဆိုပါ မြွေဟာ ဖောင်းကြွနေတဲ့ ရင်သားရဲ့ နောက်ကွယ်က ဆီလီကွန်အဆိပ်ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရတာလို့ တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ မြွေအကိုက်ခံရတဲ့ အစ္စရေးမော်ဒယ် Orit Fox က မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးသာ ထိုးခဲ့ရပြီး ဆီလီကွန်အစွမ်းထိသွားတဲ့ မြွေကတော့ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကဲ ဒီတော့ကာ ... ဘော်ဒါအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနေနဲ့ သတိထားကြလော့ …….
Video ကြည့်ရန် .........
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှ သိမ်းဆည်းရမိထားသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားမီးရှို့ဖျက်ဆီး
ရေတံခွန်ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း ရုတ်တရက် ခြေချော်ကျကာ (၂)ဦးလုံး သေဆုံး (ပြည်တွင်း ရုပ်သံ)
ချောက်မြို့နယ် စိမ်းလန်းစိုပြေနိုင်ဖို့ အပင်ပေါင်း (၂၀၀၀၀) စိုက်ပျိုးတော့မယ့် နေထူးနိုင်
Children of the World 2019 ပြိုင်ပွဲမှာ အမြင့်ဆုံး ရွှေတံဆိပ်(၂)ဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ
Apple နဲ့ Samsung ကို အသာလေးတောက်ချပစ်လို့ရတဲ့ Huawei Mate 20 Pro
တစ်ချက်ကြည့်ရုံနဲ့ တစ်သျှူးပေါ် ပုံတူအလွတ်ဆွဲနိုင်တဲ့ ဒေါင်းရဲ့ လက်ရာမြောက်အနုပညာ
မီးသတ်ကိုအနိုင်ကျင့်တာလား .. မီးသတ်ကအနိုင်ကျင့်တာလား
တစ်ပါတ်အတွင်း ဗိုက်ခေါက်ပျောက်ချင်ရင် ဒီဖျော်ရည်လေး သောက်ကြည့်ပါ. . .
ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုတောင်သေစေနိုင်တဲ့ အံ့ဖွယ်အစွမ်းနဲ့ ၃မျိုးစပ် ဖျော်ရည်
သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေက သင့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကို ဖော်ပြနေပါတယ်
Moderna ရဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရာနှုန်းပြည့်နီးပါးအောင်မြင်
17 days ago by WaiLin
ပေါင် 140 ကျော်ကျခဲ့ပြီး Winner ဖြစ်ခဲ့တဲ့မိုးယုစံမောင်လေး ဆန်းလင်းထွန်း